बढ्यो विद्युतीय कारोबारको सीमा
सेवाशुल्क पनि निर्धारण
२०७८ भदौ, ३०
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको सीमा बढाएको छ । विशेषगरी प्रिपेड कार्ड, वालेटबाट गरिने कारोबारको सीमा बढाइएको हो । राष्ट्र बैंकले मंगलवार भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०७८ जारी गर्दै विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको सीमा बढाएको हो । साथै, विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबार सेवा शुल्क पनि स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको छ ।
अब प्रिपेड कार्डबाट मासिक २ लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा प्रतिकारोबार रू. १० हजार र प्रतिदिन रू. २० हजारको सीमा तोकिएको छ ।
यसअघि प्रतिदिन र प्रतिमहीनाको सीमा नै तोकिएको थिएन । प्रतिकारोबार भने रू. २५ हजार तोकिएको थियो । अहिले यसको माग बढी भएपछि कारोबार सीमालाई स्पष्ट गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
एनएफसी (नियर फिल्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलाजी) कन्ट्याक्टलेस कार्डमार्फत गरिने कारोबारको सीमा पनि बढाइएको छ । यसअघि यस्तो प्रविधिमार्फत एकपटक रू. २ हजारसम्म मात्र कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था थियो । अब भने एकपटकमा रू. ५ हजारसम्म कारोबार गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले वालेटमार्पmत गरिने कारोबारको सीमा पनि बढाएको छ । अब बैंक खाताबाट वालेटमा एकपटकमा रू. ५० हजारसम्म पैसा जम्मा गर्न सकिनेछ । यस्तै, १ दिनमा रू. १ लाख र महीनामा रू. १० लाखसम्म रकम जम्मा गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
वालेटबाट अन्य बैंक खातामा रकम जम्मा गरिने रकमको सीमा पनि बढाइएको छ । अब वालेटबाट बैंक खातामामा रकम जम्मा गर्न एकपटकमा रू. ५० हजार, प्रतिदिन रू. १ लाख र प्रतिमहीना १० लाखको सीमा तोकिएको छ । वालेटबाट वालेट वाहकको बैंक खातामा रकमान्तर गर्दा भने कुनै सीमा नलाग्ने बताइएको छ ।
वालेटमा मौज्दात राख्न पाइने रकमको सीमा पनि बढाइएको छ अब वालेटमा रू. ५० हजारसम्म मौज्दात राख्न पाइनेछ । सो सीमा भन्दा बढी रहेको रकम अनिवार्य रूपमा ग्राहकको सम्बन्धित बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको शेवा शुल्क निर्धारण गरेको छ । यसअघि पनि सेवाप्रदायक संस्थाहरूले सेवा शुल्क लिने गरेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले स्पष्ट रूपमा त्यसको सीमा निर्धारण गरेको थिएन ।
नेपाल सरकार, राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध भएका भुक्तानी सेवाप्रदायकले रू. ३ हजारसम्म राजस्व भुक्तानी गर्दा प्रतिकारोबार ५ रुपैयाँसम्म शेवा शुल्क लिने सक्नेछन् । ३ हजारदेखि १० हजारसम्म, १० हजारभन्दा बढी राजस्व भुक्तानी गर्दा रू. २० रुपैयाँ (प्रतिकारोबार) शेवा शुल्क लिन पाइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
मोवाइल बैंकिङबाट गरिने कारोबारको सेवाशुल्क पनि निर्धारण गरिएको छ । अब मोबाइल बैंकिङबाट ५० हजारसम्म कारोबार गर्दा प्रति कारोबार रू. १० रुपैयाँ सेवा शुल्क लाग्नेछ । यसैगरी ५० हजारदेखि रू. १ लाखसम्म कारोबार गर्दा प्रतिकारोबार रू. २० र १ लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्दा प्रतिकारोबार रू. ३० सम्म सेवाशुल्क लाग्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले राष्ट्रियस्तरका ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रिपेड कार्डलगायत विद्युतीय भुक्तानी कार्ड जारी गर्न बाटो खुला गरेको छ । यसअघि उनीहरूले क्रेडिट कार्डबाहेक अन्य कार्ड जारी गर्न पाउँदैन थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भुवन कडेलले विद्युतीय कारोबारको सीमा बढाइएको बताए । ‘यसअघि विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको सेवाशुल्क त्यति व्यवस्थित थिएन । अहिले आएर त्यसलाई स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने ।
जीडीपीभन्दा ठूलो वित्तीय स्रोत[२०७८ असोज, ४]
निक्षेपको ब्याजदर नै दोहोरो अंकमा[२०७८ असोज, १]
महँगियो भारतीय विद्युत्[२०७८ भदौ, ३१]
बढ्यो विद्युतीय कारोबारको सीमा[२०७८ भदौ, ३०]
गण्डकीको पर्यटनमा कोरोना प्रभाव : ४० प्रतिशत व्यवसायीले पाएनन् मौद्रिक नीतिको सुविधा[२०७८ भदौ, २९]
थपिए १०९५ जना कोरोना संक्रमित, ८ जनाको संक्रमणपछि मृत्यु[२०७८ असोज, ४]
कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न अर्थमन्त्रीले विश्व बैंकसँग मागे थप सहयोग[२०७८ असोज, ४]
चेक क्लियरिङ हुने समय बढाएर दिउँसो ३ बजेसम्म[२०७८ असोज, ४]
प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भयो बजेट[२०७८ असोज, ४]
आजदेखि नयाँ नोट साट्न पाइने [२०७८ असोज, ४]
थपिए १०९५ जना कोरोना संक्रमित, ८ जनाको संक्रमणपछि मृत्यु
नेपाल ल्युब आयलको बोनस शेयर सूचीकृत
२६९८.२४ विन्दुमा झर्‍यो नेप्से परिसूचक, कारोबार रकम ८ अर्ब ४९ करोडमा सीमित
कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न अर्थमन्त्रीले विश्व बैंकसँग मागे थप सहयोग
नेपाल टेलिकमको ल्यान्डलाइन टेलिफोनको ग्राहक संख्या कति छ ?